About Us - Zhejiang Estar Mechanical Co., Ltd
Sleeve press kufanelekile
Ubhaqo Roll sleeve
Yolula wokucoca kunye nebandla slide
Auto sokunyathela iDie ipleyiti
Abaza kuzisebenzisa Automotive
IDie ekubunjweni iDie
IDie Baza, iDie & NGAMACANDELO
FOR esisangqa Automotive
FOR Electric Power ISIXHOBO
FOR APARETHASI KWEZONYANGO
FOR EZINYE UHLOBO
ISIKHOKELO BUSHING & ipleyiti
Pet PREFORM IKUBUMBE ipleyiti
Plastic IKUBUMBE BUSHING
PTFE TILTING iPAD Fakani Ukunikeza
SYNCHRONIZER Ring INDIBANO
NGAMACANDELO ukudluliselwa GEAR
Zhejiang Feiyu Automation Technology Co., Ltd.was owasekwa ngo-2004, isekelwe kuphando nophuhliso, ukwenziwa kunye nokuthengiswa ngokuwatshibiliza iimveliso lokuzala kwamashishini asekelwe. abasebenzi abangaphezu kwama-20 ezikhoyo iteknoloji R & D, iimveliso ziye ngokubanzi ezisetyenziswa kushishino izithuthi, oomatshini yokwakha, ishishini metallurgical, ezigcina amanzi kunye lombane, mveliso oomatshini ngaphezu kwama-30 amashishini intsika, kukuba kwishishini amangalele yasekhaya laxhamla igama elithile umenzi.
Zhejiang estar obunjineli boomatshini Co., ltd. Igxininisa kakhulu kwimveliso ukuzeyisa yokuqaba bushing, afe bephosa kufa ufe iindawo ezikhupha, ioli Bushing sintered, isangqa syn, kunye PTFE tilting pad Yolula ukuzala.
I-Company ngesibindi ohlaziya amashishini akhoyo ngakumbi. Ngenxa zokomeleza uqeqesho weetalente yokuqala, iNkampani ngokubanzi athole ama zentlalo, iphumeza ngokupheleleyo indlela ulawulo lwangoku kwaye isicwangciso esitsha intengiso, yaye uya ngokuzinikezela kuphuhliso lwexesha elide self-yokuqaba kushishino ukuzala. Le nkampani izama ukulawula sikuzalise inkqubo. Nenkqubo yayo yolawulo phambili, inkampani iye yamisela epheleleyo (ISO9001 ISO / TS16949) nenkqubo yolawulo lomgangatho esekelwe kwi-nkqubo kumgangatho "Umgangatho Wokuqala, Credit lokuQala UkuKhula", kwaye umgangatho nokusebenza layo lifike phesheya iimveliso akwanjengala eliphezulu level. Njengenye amashishini kushishino iibheringi ezaziwayo-kakuhle Jiangsu, Zhejiang, Jiashan Feiyu abe uyilo mveliso olufanelekileyo ngokuqhubekayo kuphuculwe umthamo lokuvelisa kunye nomgangatho iimveliso. Ukususela ekusekweni kwe nkampani, iye yasekwa isicwangciso sophuhliso iprojekthi-kwakhokelela ngokuqhubekekayo ukusungula iimveliso ukuphucula ukhuphiswano lwamashishini, ukongeza isampula imveliso, utshintsho oluqhubekayo kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha.
Ukuba ukuhlola emarikeni, ngokusekelwe ihlabathi ukuqhubeka nokwanelisa abathengi olunokwahlukana okukhulayo, iimfuno ezikumgangatho ophezulu, yaye ngokubonakalayo ukwandisa kwiimarike zangaphandle kunye kwimarike yamazwe ngamazwe. Products lithunyelwa Western eYurophu, eMelika kunye mpuma Asia kumazwe angaphezu kwama-20 kunye nemimandla. Le nkampani iza sandise olunxantathu kushishino tye, ukudala uqoqosho isikali, ngokupheleleyo ukuvula iinkalo ezintsha, thinta iingenelo ezintsha zala macandelo kwaye ukuzifezekisa iinjongo zalo zophuhliso olucwangcisekileyo, kwaye adale ikamva nobuhlakani kunye nabahlobo kuzo zonke iinkalo zobomi.
Idilesi: Zhejiang Jiashan Weitang Industrial Park Changsheng Road ngomhla we 9 ku
iibheringi ngokuhambisa idla ngokuba self-lubrica ...
Ioli-free iimpawu ukuzala
iibheringi ngokuhambisa kufuneka sinikele ingqalelo ...
Kumboniso Wentengiso Wezizwe Ngezizwe For Construction ...